भ्रमको खेति नगर्न साईबर स्याललाई मेयर दाहालको खबरदारी ! - Kantipath.com
भ्रमको खेति नगर्न साईबर स्याललाई मेयर दाहालको खबरदारी !
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल भ्रमको खेति नगर्न साईबर स्यालहरूलाई खबरदारी गरेकी छन् । एक अनलाईनले उनको नाम समेत जोडेर ‘प्रचण्डकी छोरीकै महानगरमा लासमा पनि लुट, कोरोना संक्रमितको शव जलाएको २८ हजार शुल्क लिइँदै’ भन्ने शिर्षकमा समाचार छापेपछि फेसबुक मार्फत प्रष्टीकरण दिएकी हुन् ।
उक्त समाचारमा ‘महानगर अन्तर्गतको देवघाटस्थित दियालो बंगलानजिक नारायणी नदी किनारमा संक्रमितको शव जलाउन ठाउँमा एउटा शव जलाएको २८ हजार रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ । मृत्युपछिको मानवीय पीडा र संवेदना बिर्सिएर महानगर लासबाट समेत असुलीमा लागेको पाइएको छ ।’ भन्दै उल्लेख गरिएको छ । तर मेयर दाहालले शव ब्यबस्थापन गरेर पैसा नलिएको र शब जलाउने कार्य महानगरको नरहेको र नभएको प्रष्ट पारेकी छन्। महानगरको हवाला दिंदै गरिएको भ्रमपुर्ण समाचार संप्रेषणलाई उनले कारबाहीको माग गरेकी छन्। उक्त अनलाईन सूचना बिभागमा दर्ता भएको हो वा हैन त्यो पनि साईटमा उल्लेख गरिएको छैन ।
कोरोना बाट मृत्यु भएकाहरूको शवको व्यवस्थापन गरिने दायित्व केन्द्र सरकारले सेना/प्रहरी र प्रशासनलाई तोकेको र आजसम्म ब्यवस्थापन त्यसरी नै हुदै आएको उनले बताईन । स्थानिय सरकारको तर्फबाट शब ब्यबस्थापनका लागी महानगरले जेसिभी र चालकको व्यवस्था गर्दै आएको छ। महानगरले संक्रमित बिरामीका लागी उपचारमा सहज होस भनेर ४ वटा एम्बुलेन्स निशुल्क ब्यबस्था गरिएको छ। शब बहानको पनि निशुल्क ब्यबस्था महानगरले गर्ने गरि तयारी गरिरहेको दाहालको भनाई छ ।
महानगरमा अक्सिजन सहितको आईसोलेसनका लागि महानगरका ३० बेड तयारी अवस्थामा छन् । महानगर भित्र एन्टिजेन परिक्षण ४ ठाउबाट भैरहेको छ । महानगरबासीको सेवामा महानगरपालिका हरदम उपस्थित हुने र कुनै अफवाह वा भ्रमको पछि नलाग्न उनले आग्रह गरेकी छन् ।
Previous Previous post: अमेरिकाले अन्य देशलाई निशुल्क ८ करोड डोज कोभिड खोप दिने
Next Next post: फाइजरको कोरोना खोप फ्रिजको तापक्रममा एक महिनासम्म राख्न मिल्ने